Nagarik News - पृथ्वीनारायणको तेजोवध र विखण्डन प्रक्रिया
पृथ्वीनारायणको तेजोवध र विखण्डन प्रक्रिया
सोमबार २७ पुष, २०७२
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह नेपाल र नेपालीका गौरव हुन्। उनले एकीकरणमार्फत 'विशाल–नेपाल' निर्माण गरेर यस क्षेत्रका स–साना हिन्दु राज्यहरुको अस्मिता जोगाए। राज्यका सम्पूर्ण जातिलाई एक नेपाली जातिमा परिणत गराए। नेपाल–सम्राज्यवादी शक्तिसँग भिडेर स्थापित भएको राष्ट्र हो। चन्द्र–सूर्य अंकित झण्डा फहराएर पृथ्वीनारायणले हिमवत् खण्ड नेपालको अस्मिता र मौलिकता जीवन्त राख्ने महान कार्य गरे।
विशाल नेपाल सिर्जना हुनुभन्दा अगाडि हिमवत् खण्डको यो क्षेत्रमा थुपै्र स–साना राज्यमा विभाजित थिए। पूर्वमा ब्रह्मपुत्र, पश्चिममा हिन्दुकुश, उत्तर कैलाश मानसरोवर र दक्षिण गंगासम्मको भूभाग हो– हिमवत् खण्ड। यस क्षेत्रमा शक्तिशाली बेलायती साम्राज्यको आँखा परिसकेको अवस्थामा पृथ्वीनारायण जस्तो सपूत गोर्खामा नजन्मिएका भए यो क्षेत्रको अस्मिता उसैबेला गुमिसक्ने थियो। 'मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबै जातको फूलबारी हो, सबैलाई चेतना भया' भन्ने उनको दिव्योपदेशले सम्पूर्ण नेपालीलाई उत्पे्ररित गराउँछ।
तर कतिपय विखण्डनकारीहरु इसाईको भरिया बनेर पृथ्वीनारायण शाहप्रति नकारात्मक व्यवहार गर्ने गर्छन्। माओवादी कथित जनयुद्धमा पृथ्वीनारायण शाहका सालिक भत्काउने काम गरियो। गोर्खामा नैं जन्मिएका बाबुराम भट्टराईले उनको अवमूल्यन गर्दै पृथ्वीनारायणलाई सामन्तीका नाइके भनेर कान्तिपुरमा लेखे– 'पृथ्वीनारायण शाहले सामान्ती राज्य सुरु गरे। उनले धार्मिक आधारमा खस आर्यहरुलाई माथिल्लो जातको मान्ने र अरु जातलाई तल्लो जातका मान्ने गर्थे। पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको राज्य वर्गीय र जातीय उत्पीडनमा आधारित थियो।' यिनै भट्टराईले माओवादी युद्धका बेला पृथ्वीनारायण शाहको सालिक भत्काउने अभियानै पनि चलाए। गोर्खास्थित बाटले चौरमा निर्मित पृथ्वीनारायणको सालिक पनि ढालियो। सो ठाउँमा लखन थापाको सालिक ठड्याइयो। के लखन थापाको सालिक राख्ने जग्गा अन्य ठाउँमा पाइँदैनथ्यो? पोखरामा पृथ्वीनारायणको सालिक ढालेर थापाको राखिएपछि त्यसको अनावरण गर्न पनि प्रधान मन्त्रीका रूपमा तिनै भट्टराई पुगेका थिए।
२०६३ को आन्दोलनपछि गृह मन्त्री नियुक्त भएका कृष्ण सिटौलालाई दबाब दिएर बाबुराम भट्टराईले नै पुस २७ गते सरकारीरूपमा मनाइँदै आएको पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस नमान्ने निर्णय गराए। त्यो बेलादेखि अनेकौं सरकारी बिदा थपिए तर नेपालको राष्ट्रिय एकता दिवस भने खारेज गरियो। यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ नेपालको विखण्डन प्रक्रिया र अधोगति। मानिसले जतिसुकै शैक्षिक योग्यता हासिल गरे तापनि ऊसँग आफ्नो जन्भूमिप्रति प्रेम छैन र राष्ट्र निर्माताप्रति नकारात्मक हुन्छ भने त्यस्ता कपुत नै देशका रोग हुन्। आखिर किन बाबुरामले आफ्नै देशको पहिचानमाथि धावा बोले? यति तल झरेर नेपालीहरुको अपमान गरे? उनले इसाईहरुको इशारामा यो कुकर्म गरे किनकि उनी पनि गोर्खा लुइटेल स्कुल पढ्दै गरेका बेलादेखि इसाई बनेका हुन् भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेका छन्। त्यसैले राष्ट्र निर्माताका सालिक भत्काउने, हिन्दु मन्दिर भत्काउने, गाई काटेर खान उक्साउने काम गरेका हुन्। जसले यो देश बनायो, जसले विश्व साम्राज्यवादी शक्तिसँग भिडेर विशाल नेपाल सिर्जना गर्योस, जसले स्वाभिमान र सार्वभौम प्रतिष्ठाका साथ नेपालीलाई बाँच्न सिकायो उनकै तेजोवध गर्नु महान् भूल हो।
त्यस्तै पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा एक फट्टिचर पत्रकारले २०७२ साल पुस २६ गतेको राजधानी पत्रिकामा लेखे– 'यदि पृथ्वीनारायण शाहको २९४ औं जयन्तीलाई एकता दिवसका रूपमा मनाउन खारेज गरेको दिनलाई राष्ट्रिय एकीकरणका रूपमा मनाउने कार्य भएमा यसले मुलुकमा अर्को द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने जोखिमसमेत देखिएको छ।' 'पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण नगरेको भए पनि यो मुलुक र यहाँका निवासी कहीँ जाने थिएनन्, कुनै न कुनै राज्यमा रहन्थे नैं' पनि भनेका छन्। धिक्कार यस्ता कुपुत्रलाई जसले हावादारी कुतर्क गरेका छन्। यिनैले २०७० पुस २४ गते पनि यही पत्रिकामा लेखेका थिए– 'पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता मान्नु पाखण्डीपन हो।' तर सबैले बुझिराखे हुन्छ, सूर्यलाई कसैले हत्केलाले छेक्दैमा कदापि छेकिँदैन।
खास कुरा के हो भने पृथ्वीनारायणले काठमाडौं उपत्यका विजय गरेपछि क्रिश्चियन धर्म प्रचारक केपुचिन पादरीलाई यहाँबाट धपाएर चर्चलाई अर्कै काममा प्रयोगमा ल्याएका थिए। त्यही रिसले पृथ्वीनारायण शाहलाई बदनाम गर्न उनले कीर्तिपुरेहरुको १७ धार्नी नाक काटेका प्रचार केपुचिन पादरीलाई भनाएर अंगे्रजी लेखक कर्कपेटि्रकले भ्रम सिर्जना गरेका हुन्। त्यसबेला पृथ्वीनारायण नुवाकोटमा रहेका र त्यसरी नाक काट्ने आदेश दिएका थिएनन् भन्ने खुलिसकेको छ। पृथ्वीनारायणको नीति आफूले विजय गरेका राज्यका जनताको संरक्षण गर्ने थियो। उनले आततायी प्रकारले दुनियाँलाई नै आतंकित पारेर विशाल नेपालको राजा हुने इराधा राखेका थिएनन्। अंग्रेजहरुले यस क्षेत्रमा कब्जा जमाए भने जनताको कस्तो दूरावस्था होला भन्ने कुराले उनलाई चिन्तित बनाएको थियो।
त्यसबेला पृथ्वीनारायणले 'गोर्खा भन्नु र नेपाल भन्नु उनै गोरखनाथ हुन्। फिरङ्गी भनेको ब्वासो हो। जयप्रकाशले यो मुलुक खाया पनि मैले खाया पनि उस्तै कुरा हो। तर फिरङ्गी भनेको अर्कै हो' भनेर यस क्षेत्रका स–साना राज्यका जनतालाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गराएका थिए। उनका पुरोहित शक्तिवल्लव अर्यालले मुक्तकण्ठले विशाल नेपालबारेमा प्रशंसा गरेका थिए– 'जौन नेपालराज्य विषये हिमाल पर्वतका कन्दरादेखि...चारैतिरबाट मुनिजनहरुले सेवा गरिएका कौसिकीका धारा वेगले बहन्छन्, जहाँ प्रख्यात भएका नीलकण्ठ विराजमान भयाका छन्, सोही नेपाल देश हो। जहाँ हिमालपर्वतकी पुत्री गुह्रेकाली विराजमान भयाकी छन्, जहाँ पुण्या भयाकी वाग्मती छन् जहाँ पशुपतिका प्रत्यक्ष भयाका शिवलिङ्ग छन्, जहाँ चाँगुनारायण छन्, जहाँ सम्पूर्ण भयकन हर्न्याम वज्रयोगिनी छन्, जहाँ पञ्च लिङ्गेश्वर पचली भैरव छन्।'
पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा चन्द्र–सूर्य अंकित झण्डा फहराएर हिमवत्खण्डको अस्मिता र मौलिकता जीवन्त रहेको हो। उनले उत्तरमा ठूलो राष्ट्र चीन र दक्षिणमा ठूलोको बीचमा कस्तो कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझेर भनेका थिए– 'यो राज्य दुई ढुङ्गाको तरुल जस्तो रहेछ। चीनको बादशाहसँग ठूलो घाहा (राम्रो सम्बन्ध)राख्नु, दषिनको समुन्द्रको वादशाहसित घाहा त राख्नु तर त्यो महाचतुर छ। देशका महाजनहरु हाम्रा मुलुकमा आया भन्या दुनियाँ कंगाल गरी छाड्छन्' भन्ने पृथ्वीनारायण कति दूरदर्शी थिए भन्ने अहिले पनि त्यत्तिकै यथार्थ सावित भएको छ।
यस क्षेत्रमा एउटा सपुत पृथ्वीनारायणको जन्म हुनु नेपालीहरुको भाग्य हो। उनले एकीकरण गरेर विभिन्न जात जाति, धर्म, वेशभूषामा विभाजित नेपालीलाई एक नेपाली जातिमा परिणत गराए। एकीकरणअघि स–साना राज्य ठूलो संकटमा थिए। दक्षिणबाट अंग्रेज आक्रमणको तयारीमा थियो। त्यो बेला पृथ्वीनारायणले यो क्षेत्रका तमाम जाति तथा मुसलमानसमेतको सहयोगमा आधुनिक एकीकृत नेपाल सिर्जना गर्न सकेका थिए। यो क्षेत्रका साना राज्यका जनता सबै हिन्दु भएकाले र नेपाली भाषा सबैजसो ठाउँमा सम्पर्कमा आइसकेको हुँदा उनलाई एकीकरणमा धेरै सजिलो भएको थियो। राष्ट्रिय एकीकरणको अभियानमा काठमाडौं उपत्यका विजयपछि सिंहासनमा आसिन हुनुभन्दा पहिला शाक्य बौद्धवंशकी जीवित कुमारीको हातको टीका लगाएर तथा उनको पाउमा ढोग गरेरमात्र पृथ्वीनारायण राजसिंहासनमा बसेका थिए। यसबाट थाहा हुन्छ कि नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण धर्म, जाति र यस क्षेत्रको परम्परालाई शिरोधर गर्नसक्ने क्षमता पनि उनका थियो। खासमा अहिले पृथ्वीनारायणको विरोध प्रतिशोधस्वरूप इसाईहरुबाट भइरहेको छ तर जसले जे भनोस्, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह नेपाल र नेपालीको मन मष्तिस्कमा अजर अमर छन्।